भारतीय पाइलटलाई पाकिस्तानले रिहा गर्ने भएपछि सन्देशमुलक तस्विर भाइरल ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भारतीय पाइलटलाई पाकिस्तानले रिहा गर्ने भएपछि सन्देशमुलक तस्विर भाइरल !
नयाँ दिल्ली । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको तनाव नचर्काउने र शान्तिका लागि आफ्नो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युद्धक विमानका चालकलाई शुक्रबार रिहा गर्ने घोषणा गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्विर भाइरल बनेको छ।
उक्त तस्विर पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय पाइटलटकि आमाको रहेको बताइए पनि तस्विर अरु कसैको हुन सक्ने ठानिएको छ। तस्विरमा देखाइएको छ, इमरान खानले सम्बोधन गर्दै गर्दा नतमस्तक भएर रुँदै आमाले सुनिरहेकि छन् र रिहाई गर्ने घोषणा सँगै एकैछिनपछि खुशीका आसु बगेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा यो तस्विर भाइरल बनेपनि यसको आधिकारिता भने खुलाइएको छैन् । तस्विर धेरै सेयर भइरहेको छ भने पुरानो तस्विर र अरु कोहि महिलाको हुन सक्ने ठानिएको छ। तस्विरले सन्देश बोलिरहेको धेरैको जोड छ।
पाकिस्तानी संसदमा बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खानले नियन्त्रणमा रहेका पाइलटलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका थिए। पाकिस्तानी संसदमा इमरानले भनेका थिए, “पाकिस्तानसँग शक्ति नभएका कारण भारतसँग झुकेको नभै इश्लामावाद तनावलाई चर्काएर कसैलाई फाइदा हुँदैन भन्ने बुझेको छ। शान्तिका लागि हामीले बुधबार पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका युद्धक विमानका चालकलाई रिहा गर्नेछौँ।”
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारत सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुको आशय आउँदै गरेको निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पकडमा पार्नु भएको दावी गरे।
पाकिस्तानको कब्जामा परेका अभिनन्दन वर्तमान को हुन् ?
ती पाइलट भारतीय वायु विङ कमान्डर अभिनन्दन वर्तमान हुन्। उनले बुधवार बिहान लडाकु विमान मिग २१ उडाएका थिए। अभिनन्दनले बुधवार बिहान उडाएको मिग २१ विमान पाकिस्तानी वायुसेनाले खसालिदियो र उनलाई आफ्नो नियन्त्रणका लियो।
पाकिस्तानी सेनाले अभिनन्दन आफूसँग सकुशल रहेको बताएको छ।पाकिस्तानबाट पहिले सार्वजनिक गरिएको भिडिओमा अभिनन्दनको अनुहारमा रगत पोतिएको र उनी घाइते अवस्थामा देखिन्छन्।
एउटा भिडिओमा अभिनन्दनलाई केही मानिसले पिटिरहेको देखिन्छ। अर्को भिडिओमा अभिनन्दनको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ।त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘मेरो नाम विङ कमान्डर अभिनन्दन हो। मेरो सेवा नम्बर २७९८१ हो। म विमान चालक र हिन्दू हुँ।’
१३ हजार जागिर खुल्दा झन्डै १० लाखको आवेदन, कति कमायो सरकारले? जान्न पुरै समाचार हेर्नुस्
समाजलाई चक्मा दिदै लम्जुङमा बाहुनको छोराले गरे सार्कीको छोरीसँग यस्तो धुमधाम मागी विवाह!